Cabida Kofeega waxay joojisaa cayilka dumarka - Arimaha Bulshada
Cabida Kofeega Waxay Joojisaa Cayilka Dumarka Sida Lagu Ogaaday Daraasad Cusub
Cabida Kofeega waxa uu la dagaalami karaa cayilka dumarka sida lagu ogaaday daraasad cusub.
Kofeega waxaa ku jira maadooyin lida ku ah cayilka dumarka sida ay sheegeen baarayaasha.
Dumarka caba labo ama seddex koob oo kofee ah maalintii waxaa la arkay in baruurtooda ay hoos u dhacday boqolkiiba 2.8
Dumarka da’dooda ay u dhaxeyso 20 ilaa 44 waxay baruurtooda hoos u dhacday boqolkiiba 3.4 halka dumarka ay da’dooda u dhaxeysa 45 ilaa 69 ee cabay in ka badan afar koob ay ay baruurtooda hoos u dhacday boqolkiiba 4.1
Natiijada daraasada lagu soo saaray waa isku mid marka la cabo kofee caadi ah ama mid uu ka maqan yahay kafiinka ee loo yaqaano decaf.
Dr Lee Smith oo wax ka dhiga jamaacada Anglia Ruskin University ayaa yiri: “Waxaa jiri kara maadooyin ku jira kofeega oo saameyn ku leh cayilka ama naaxida.”
“Baaritaankeena wuxuu soo jeedinayaa inay jiri karaan maadooyin ku jira kofeega oo aan aheyn kaafiin oo saameyn ku yeelan karta cayilka dumarka, taasoo noqon karta in loo isticmaalo in lagula dagaalamo cayilka.
“Waxaa suurtogal ah in kofeega lagu soo darro cuntada isku dheelitiran ee caafimaadka leh si loola dagaalamo cayilka xad dhaafka ah.”
Dr Smith ayaase ka digay in baaritaankaan aan si dhab ah loo qaadanin madaama uu weli marayo marxaladii koowaad islamarkaana aysan jirin weli cadeyn rasmi ah oo sheegeysa in kofeega uu cayilka la dagaalamo.
Daraasada waxaa sameysay National Health and Nutrition Examination Survey oo taageero ka heleysao xarunta Centre for Disease Control ee dalka Mareykanka waxaana lagu daabacay The Journal of Nutrition.